Showing 141-160 of 1,105 items.
सिरहा : जग्गा खाली गराउन बन्दुकसहित पुगे भूमाफिया साह
सिरहा,फाल्गुन ४ गते ।&nbsp; सिरहाको मिर्चैया नगरपालिका&ndash;५ मा रहेका सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउन शनिबार भूमाफिया बीरेन्द्र साह बन्दुकसहित पुगेका छन् ।भूमाफिया मिर्चैया नगरपालिका&ndash;५ का वीरेन्द्र साह पूर्व&ndash;पश्चिम राजमार्ग अन्�
जनकपुरधाम फागुन ३ गते । साप्ताहिक रेल्वे ट्रैक सरसफाई अभियानको ६१ औं हप्ता आज शनिबार जनकपुरको सीता चौक स्थित गरिएको छ। &nbsp;प्रत्येक शनिबार महिला एवं बालबालिकाको पहल एवं युवा अभियाणीहरु को बिशेष उपस्थितिमा चलिरहेको निरन्तर साप
सिरहामा अवैध सुर्ती र रक्सी बरामद
सिरहा,फाल्गुन ३ गते । सिरहामा भन्सार छली गरी ल्याउँदै गरेको सुर्ती र रक्सी बरामद भएको छ ।शुक्रबार सिरहाको औरही गाउँपालिका&ndash;१ कुण्डलपुरस्थित भारतबाट भन्सार छली नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको २० किलो सुर्ती अन्दाजी १२ हजार ८ सय बरा�
देशमा जनता राज ल्याउनमा महान जनयुद्धको उपहार हो: नेता बरबरिया
धनुषा फागुन १ गते । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का धनुषा जिल्ला ईन्चार्ज श्रवण कुमार बरबरियाले देशमा जनता राज ल्याउनमा महान जनयुद्धको २५ औं उपहार रहेको बताउनुभयो । आज (विहिबार) नेकपाका भातृ सँगठन राष्ट्रिय युवा सँघ
सिरहामा एक मजदुरको खाल्डोमा डुबेर मृत्यु
सिरहा माघ,२९ गते । सिरहामा एकजना मजदुर मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । सिरहाको बिष्णुपुर गाउँपालिका&ndash;१ मा सप्तरीको सिस्बा बल्ही घर भएका ३५ वर्षीय पुरन मण्डलको मृत्यु भएको सिरहा प्रहरीले जनाएको छ । ओभरहेड पानी ट्यांकी निर्माण क�
सिरहा क्याम्पसमा समाजवादी विद्यार्थी द्वारा सरसफाई एवम डस्टविन हस्तान्तरण
सिरहा,माघ २८ गते । सुर्यनारायण सत्यनारायण मोरबैता यादव बहुमुखी क्याम्पस सिरहामा समाजवादी विधार्थी युनियनले सरसफाइ कार्यक्रम गरेका छन। सिरहा क्याम्पसमा आज एक कार्यक्रम बिच सरसफाई एवम् डस्ट्विन बितरण समेत भएको थियो । उक्त का�
राराब क्याम्पसका प्राध्यापक फर्जी हाजिरी,एकै दिन गर्छन् महिना दिनका हाजिरी
जनकपुरधाम माघ २८ गते । जनकपुरको राम स्वरुप राम सागर बहुमुखी (राराब) क्याम्पसका प्रध्यापकहरु फर्जि हाजिर तलब खादै आएको रहस्य बाहिर आएको छ । कलेजका बिद्यार्थीहरुले पठन पाठनको मांग गर्दै राराब क्याम्पसको हाजिरी रजिष्टर चेकजांच �
सिरहा,माघ २८ गते । तराई मधेसको महत्वपूर्ण उत्पादन खाद्यान्न 9धान, गहुँ0 हो। खाद्यान्न उत्पादनको मूलस्रोत भएकाले देशका अन्य भागभन्दा स्रोतका हिसाबले मधेस समृद्ध छ। तर मधेसका गाउँ&ndash;बस्तीको अवस्था हेर्दा अधिकांश क्षेत्रमा समृद
सिरहामा दुर्घटना स् मोटरसाइकलमा जन्तीबाट फर्किदै गरेका दुई जनाको मृत्यु
सिरहा,माघ २७ गते । सिरहमा बसले ठक्कर दिदा मोटरसाईकलमा सवार दुई जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा मोटरसाईकलमा सवार सिरहा नगरपालिका&ndash;३ का ४५ वर्षिय शैलेन्द्र मण्डल र २९ वर्षिय अमन मण्डल रहेको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरू दुवैजन�
लहान अस्पतालका डाक्टरले लिए आन्दोलन फिर्ता
सिरहा,माघ २७ गते । सिरहाको लहानस्थित रामकुमार सारडा उमाप्रसाद मुरारका ९राउ० स्मारक अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार भएको घटनालाई लिएर बन्द गरिएको आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा अस्पतालले आइतबार साँझ ६ बजे देखि पुनः सुच
जनकपुरको रेल्वे ट्रैकको ६० औं सरसफाईमा राज्य मन्त्री मण्डल सहभागी
जनकपुरधाम ,माघ २६ गते । प्रदेश सररकारका उद्योग पर्यटन तथा बातावरण राज्य मन्त्री सुरेश मंडलको प्रमुख आतिथ्यमा सरसफाई गरिएको हो ।प्रत्येक शनिबार महिला एवं बालबालिकाको पहल एवं युवा अभियाणीहरु को बिशेष उपस्थितिमा चलिरहेको निरन�
लहान अस्पतालमा साँसद यादवले नै पाएनन् उपचार, जनताले कसरी पाउंछन् सेवा ?
सिरहा,माघ २६ गते । अस्पताल कस्तो हुनुपर्छ रु विरामी पुगेपछि तत्काल जाँच तथा उपचार गर्नुपर्छ । तर, राउ स्मारक अस्पताल लहानमा ठीक उल्टो छ । जहाँ साँसद जस्तो व्यक्ति दुर्घटनामा पर्छ । उपचारको लागि डाक्टर खोज्छन् । त्यहाँ अस्पतालम�
अपाँगता परिचयपत्र पाएपछि जनप्रतिनीधि र कर्मचारीलाई प्रशँसा
धनुषाको शहिदनगरमा सम्पन्न अपाँगता परिचयपत्र शिबिरबाट फरक क्षमताका व्यक्ति (अपाँग) हरु लाभान्वित भएको छ ।&nbsp; माघ २४ र २५ गते सँचालन भएको दुई दिने अपाँता परिचय पत्र शिविरको क्रममा २ सय २८ जनाले सेवा लिएको हो । शहिदनगर नगरपालिकाभ�
सिरहा,माघ २५ गते । पर्यापर्यटनको आकर्षक केन्द्रको रुपमा मिर्चैया नगरपालिका&ndash;९ को कमल दहले काचुली फेरेको छ । राष्ट्रपति तराई&ndash;मधेस चुरे विकास समितिले नेपाली सेनामार्फत दहलाई पर्यटकीय स्थलको स्वरुपमा ढाल्न संरक्षण, प्रवद्र�
सिरहाबाट १२ किलो गाँजा सहित २ जना पक्राउ
सिरहा,माघ २५ गते । सिरहामा प्रहरीले अन्दाजी १२ किलो लागुऔषध गाँजा सहित २ जनालाई पक्राउ गरिएको छ । सिरहाको अर्नामा गाउँपालिका&ndash;१ बस्ने ३२ वर्षीय मोहम्मद सकिल र नरहा गाउँपालिका&ndash;१ बस्ने ३५ वर्षीय राजिन महरा छन् ।शुक्रबार दिउँस